YEYINTNGE(ကနဒေါ): ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဘယ်ကိုသွားနေသလဲ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဘာလဲ
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဘယ်ကိုသွားနေသလဲ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဘာလဲ
(သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးတို့အား ၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ် ၂၁ ရက်တွင် နယူးဇီလန်နှင့် သြစတြေးလျနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်သည့် ခရီးစဉ်မှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည်ကို တွေ့ရစဉ်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသော ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ခရီးစဉ်များတွင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးကို ခေါ်ဆောင်သွားလေ့ ရှိသည်။ (ဓာတ်ပုံ-သမ္မတရုံးဝက်ဘ်ဆိုက်))
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကြိုတင်မဲကိစ္စများ အပါအ၀င် မမျှတမှုများ ရှိခဲ့ပြီး ထိုအချိန်က ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို စစ်ဥပဒေချုပ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖူးသူ ဒုတိယတရားသူကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိုးက ဦးဆောင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းစိုးကို နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံးဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ပြောင်းရွေ့ တာဝန်ပေးအပ်လိုက်သည်။ လစ်လပ်သွားသော ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ နေရာ၌ ယခင်တပ်မတော်အစိုးရလက်ထက် နံပါတ်ခြောက်အဆင့်ခေါင်းဆောင် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးတင်အေးကို အစားထိုးခန့်အပ်ရန် သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်၌ လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းခဲ့သည်။ ဦးတင်အေးသည် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၏ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲ၌ မန္တလေးတိုင်း တံတားဦးမြို့နယ်တွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက်၌ ဦးတင်အေးက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်လိုက်ပြီး ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်တွင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် အမည်စာရင်း တင်သွင်းခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ယူခဲ့ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို ဦးတင်အေးက ပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဟာဗျူဟာများ ရေးဆွဲခဲ့သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲကိုသာမက ၂၀၁၄ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကိုပါ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတအောင် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟု ဦးတင်အေးက ကတိပေးခဲ့သော်လည်း ထိုလုပ်ဆောင်မှုအားလုံးသည် ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှသာ ဖြစ်ရမည်ဟု သတိပေးထားခဲ့သည်။ အဆိုပါ ဥပဒေဘောင်ဆိုသည်မှာ ပြင်ဆင်ရန် ခက်ခဲနေဆဲဖြစ်သော ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အပါအ၀င် မျော့ကြိုးသဖွယ် ဖြစ်နေသည့် အခြားတည်ဆဲ ဥပဒေများဖြင့် ဆုံးဖြတ်လုပ်ဆောင်မည်ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
ဦးတင်အေး၏ ၂၀၁၄ ခုနှစ် နယ်လှည့်ခရီးများ၌ ပြောကြားချက်များက ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ဦးတည်ချက်အား မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လာသည်။ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ တစ်ဦးအဖြစ် ကြားနေ၀ါဒဖြင့် သမာသမတ်ကျစွာ ရပ်တည်ရမည့်အစား စစ်အာဏာသိမ်း ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတစ်ဦး၏ သတိပေးသံများ ရောစွက်နေသည်။
၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏ အားနည်းချက်ကြောင့် ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် တပ်မတော်က အာဏာသိမ်းခဲ့ရသည်ဟု ဧပြီ ၇ ရက် ပုသိမ်ခရီးစဉ်၌ ဦးတင်အေးက ပြောကြားခဲ့သည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် အာဏာသိမ်းမှုတွင် တပ်မတော်က ရိုးရိုးသားသား ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) အနိုင်ရခဲ့ခြင်းကို သမိုင်းအရ မငြင်းလိုဟု ဆိုသော်လည်း အာဏာလွှဲမပေးခြင်းမှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ မရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အပြစ်တင်မှုများ ရှိခဲ့သည်ကို မငြင်းလိုပဲ ထိုရွေးကောက်ပွဲသည် အချိန်တိုအတွင်း လုပ်ဆောင်ရသဖြင့် အားနည်းချက်များ ရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ သို့သော် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်သွားသည်ကိုပင် ကျေးဇူးတင်ရမည်ဟု ၎င်းကပြောကြားသည်။ ထိုအခြေအနေများနှင့် ဆက်စပ်ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အခြေအနေနှင့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအကြို အခင်းအကျင်းများအပေါ် ပြင်ဆင်ထားမှုများအား ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
“၂၀၁၂ လည်းပြီးရော အီးယူသံအမတ်တို့၊ အများကြီးပါပဲ လာပြီးတော့ Free and Fair Election ဆိုပြီးတော့ အမေရိကန်သံအမတ် ပါပါတယ်၊ ကာတာတို့အောဘရိုက်တို့ ဒါတွေအကုန်လုံး ပါပါတယ်။ Free and Fair Election လို့ ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်က သူတို့တော့ ဘာမှမပြောပါဘူး။ ကျွန်တော့်ပါတီတွေပဲ ပြောတယ်။ အေး .. ၂၀၁၂ ရွေးကောက်ပွဲကတော့ လာပြောကြတာ လွတ်လပ်တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲလို့ ပြောတယ်။ ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် လွတ်လပ်လွန်းပြီးတော့ မမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲလို့၊ ကျွန်တော်ဒီလိုပဲ ပြောချလိုက်ပါတယ်” ဟု ဦးတင်အေးက ပုသိမ်ခရီးစဉ်တွင် ပြောကြားသည်။
“လွတ်လပ်လွန်းတာမှ တခါတည်း Election Campaign က Election Campaign နဲ့တောင် မတူဘူး။ ဆန္ဒပြနေသလား။ ၈၈ အရေးအခင်းများ ပြန်ရောက်နေသလား။ ဟာ.. နဖူးစည်းလည်း ပါတယ်။ အလံတွေကျတော့လည်း ကြယ်ငါးပွင့်အလံတွေ ပါတယ်။ Election Campaign တဲ့။ ဘယ်သူကမှလည်း ကန့်ကွက်မယ့်သူ မရှိဘူး။ ကန့်ကွက်ကြည့်ပါလား။ ကန့်ကွက်ကြည့်တာနဲ့ ကျွန်တော် အရှုံးပေးလိုက်မှာ။ ဥပဒေဖောက်ဖျက်ပြီးတော့ လုပ်တာပဲ။ ဒါက။ ဟုတ်လား။ အလံဥပဒေဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် အရှုံးပေးပစ်ပလိုက်မယ်” ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ထို့ကြောင့် နောင်လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲများ၌ ကန့်သတ်မှုများ ပြုလုပ်မည်ဟု ဦးတင်အေးက ဆိုသည်။
“လာမယ့်ဟာတော့ မရဘူး။ Election Campaign ကာလ သတ်မှတ်ပေးမယ်။ မလေးရှားမှာ ၁၅ ရက် သတ်မှတ်ပေးထားတယ်။ မနှစ်ကထက်စာရင် နှစ်ရက်တိုးပေးထားတယ်။ အရင် Election က ၁၃ ရက်ပဲရှိတယ်။ ကျွန်တော် နေရာသတ်မှတ်ပေးမယ်။ ပြောရမယ့်သူ သတ်မှတ်ပေးပါမယ်။ ဒီမှာ ကျွန်တော်ရွေးမယ်။ ကျွန်တော်ပြောပေါ့။ ကျွန်တော့်ရဲ့ လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ပြောပေါ့။ ပါတီက တစ်ယောက်ပြောပေါ့။ တော်ပြီ။ မဆိုင်တဲ့သူ လာမပြောနဲ့။ ၀င်ချင်ဝင်၊ မ၀င်ချင်နေ” ဟု ဦးတင်အေးက ဆိုသည်။
“ကျွန်တော် ကန့်သတ်ပါမယ်။ အချိန်ကန့်သတ်ပါမယ်။ နေရာကန့်သတ်ပါမယ်။ လူကန့်သတ်ပါမယ်။ Election Campaign ကန့်သတ်ပါမယ်။ ဒါကျွန်တော့်ရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ထဲမှာ ရှိပါတယ်” ဟု ဦးတင်အေးက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဦးဘဌေးသည် သမာသမတ်ရှိသူ တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပြီး ပါတီဆက်နွှယ်မှု ကင်းရှင်းခဲ့သူဖြစ်သည်။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ဦးသိန်းစိုးမှာ တပ်မတော်အစိုးရနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွှယ်သူ ဖြစ်သည့်အပြင် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ မူကြမ်းရေးဆွဲရေး ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း ဖြစ်သည်။
ဦးသိန်းစိုး၏နေရာ၌ အစားထိုး ၀င်ရောက်နေရာယူခဲ့သူ ဦးတင်အေးမှာ တပ်မတော်အစိုးရလက်ထက်၌ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဆင့် ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် ဦးတင်အေးသည် စစ်အာဏာသိမ်း ခေါင်းဆောင်များထဲတွင် တစ်ဦးအပါအ၀င်ဖြစ်ခဲ့ကာ တပ်မတော်၏ အဓိကစီးပွားရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ကာ အခွင့်ထူးခံ၊ အခွင့်ရေးသမားများနှင့် လက်တွဲလုပ်ကိုင်ခဲ့သော မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးပိုင်လီမိတက်၌ ဆယ်စုနှစ်ကြာ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ညစ်ပတ်နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကြိုးစားလာမယ်ဆိုရင် ဒါက Crossing the Line ပါပဲ။ တိုင်းပြည် အတိဒုက္ခ ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲဟာ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲလို အာဏာမလွှဲလို့ မရဘူး။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲလို ညစ်ပတ်လို့ မရဘူး . . . . .
တပ်မတော်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် ၎င်းရရှိခဲ့သော လစာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၎င်းနှင့်၎င်း၏ မိသားစုဝင်များ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုမှာ အံ့အားသင့်စရာ ဖြစ်စေခဲ့သည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ဦးတင်အေးသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် သမိုင်းတစ်လျှောက် ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အများဆုံး ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ရပ်တည်လျက်ရှိနေသည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် ဦးတင်အေးတို့ နှစ်ဦးစလုံးသည် စစ်တက္ကသိုလ် အမှတ်စဉ် (၉) ကျောင်းဆင်းများဖြစ်ကြပြီး နေပြည်တော် အိမ်ခြောက်လုံးတန်း၌ နေထိုင်ခဲ့သူများ ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အိမ်ခြောက်လုံးတန်း၌ အိမ်နံပါတ် (၁) တွင် အငြိမ်းစားဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ဦးသန်းရွှေနေထိုင်ပြီး အိမ်အမှတ် (၂) တွင် အငြိမ်းစား ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ဦးမောင်အေး နေထိုင်သည်။ ကျန်ရှိသော အိမ်လေးလုံးတွင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး၊ ဒုတိယသမ္မတ ဟောင်းသီဟသူရတင်အောင်မြင့်ဦးနှင့် လက်ရှိပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်းတို့ နေထိုင်ခဲ့သည်။
ဦးတင်အေးသည် လက်ရှိအချိန်အထိ သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် နီးကပ်သော ဆက်ဆံရေးရှိနေပြီး သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကလည်း ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသော ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ခရီးစဉ်များသို့ ဦးတင်အေးအား ခေါ်ဆောင်သွားလေ့ ရှိသည်။
ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ၊ ဘာတွေလုပ်နိုင်လဲ
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် မမျှတမှုများ ရှိခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကြောင့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အပေါ် ဝေဖန်မှုများ လျော့ကျခဲ့သည်။
သို့သော် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ လက်ရှိကာလအတွင်း ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး၏ လုပ်ဆောင်ပုံများနှင့် ခြေလှမ်းများက ၂၀၁၅ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် သံသယဖြစ်မှုများ ရှိလာသည်။
စစ်တပ်က အာဏာမသိမ်းလို၍ လွှတ်တော်တွင် တပ်မတော် ပါဝင်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ထုတ်ဖော်ပြောကြားထားသည့် ဦးတင်အေးသည် ပြည်သူလူထုက လက်ရှိတောင်းဆိုနေသော ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးကို လိုလားသူ မဟုတ်ချေ။ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ယူစဉ်ကာလ၌ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ သတိပေးမှုကြောင့် နိုင်ငံရေးပါတီများကို ခေါ်ယူသတိပေးခြင်းများ ရှိခဲ့သည်။ သိသာထင်ရှားသော သာဓကအနေဖြင့် လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးနှင့် လုပ်အားခ တိုးမြှင့်ရရှိရေးတို့အတွက် ဆန္ဒဖော်ထုတ်သော လူထုလှုပ်ရှားမှုများတွင် နိုင်ငံရေးပါတီများ ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း မပြုရန် ပြီးခဲ့သည့် မတ်လအတွင်းက နိုင်ငံရေးပါတီများကို ခေါ်ယူသတိပေးခဲ့သည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ လိုက်နာရမည့် စုဝေးဟောပြောခွင့်နှင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့်တို့နှင့် ပတ်သက်ပြီး ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်ရန် ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ထိုညွှန်ကြားချက်မူကြမ်း မထုတ်ပြန်မီ လပိုင်းအလိုတွင် တပ်မတော်အရာရှိ ၆၀ ကျော်ကို မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်များထမ်းဆောင်ရန် ကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်းထားခဲ့သည်။
ညွှန်ကြားချက် မူကြမ်းအရ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ခွဲ ဥက္ကဋ္ဌများ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်မှာ သက်ရောက်မှု အားကောင်းလာမည်ဖြစ်သည်။ ကော်မရှင်ခွဲဥက္ကဋ္ဌများ အနေဖြင့် စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သည်ဟု ယူဆရသော နိုင်ငံရေးပါတီများကို သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းပြီး တည်ဆဲဥပဒေဖြင့် အရေးယူရန် တိုက်တွန်းမှုများလည်း ရှိနေသည်။
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ လုပ်ဆောင်နေမှုများသည် နိုင်ငံရေးပါတီများအား ချုပ်ကိုင်လိုသည့်ဘက် ဦးတည်နေသည့်နည်းတူ လက်ရှိပြဋ္ဌာန်းထားသော ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၌လည်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ပိုမိုပေးအပ်ထားသည်။
ထိုအချက်မှာ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၀၂ တွင် ပါဝင်နေပြီး ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ခုံအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ အမိန့်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အယူခံမှုများနှင့် ပြင်ဆင်မှုများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ ဆောင်ရွက်ရသော ကိစ္စရပ်များမှာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ဆောင်ရွက်ချက်များသာ အပြီးအပြတ် အတည်ဖြစ်စေရမည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
ထိုအချက်အရ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အနေဖြင့် နိုင်ငံရေးပါတီများကို ရွေးကောက်ပွဲမပြုလုပ်မီ၊ ပြုလုပ်ချိန်များသာမက ရွေးကောက်ပွဲ ပြုလုပ်ပြီးချိန်များ၌ပါ သြဇာသက်ရောက်မှု၊ ဥပဒေအရ အရေးယူမှုနှင့် ချုပ်ကိုင်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ စမ်းသပ်သည့်အနေဖြင့် ပြုလုပ်မည့် ၂၀၁၄ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ လိုက်နာရမည့် စုဝေးဟောပြောခွင့်နှင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့် ညွှန်ကြားချက်မူကြမ်းမှာ စာမျက်နှာ ၁၈ မျက်နှာရှိပြီး အချက် ၂၀ ပါဝင်ခဲ့သည်။
မူကြမ်းတွင် ဖော်ပြထားချက်အရ မဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့် အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း စတင်ခွင့်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည့် နေရာ၊ သက်ဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော နေရာများသို့ ယာဉ်များနှင့် လှည့်လည်စုဝေး ဟောပြောခွင့်၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် မီဒီယာများမှတစ်ဆင့် ဟောပြောစည်းရုံး ဟောပြောခွင့်၊ သက်ဆိုင်ရာက ထုတ်ပြန်ထားသည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ရေးသားပုံနှိပ် ထုတ်ဝေစည်းရုံးခွင့်တို့ကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
စုဝေးဟောပြောခွင့်ကို ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ကြေညာပြီးသည့်နေ့မှ ၁၅ ရက်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲသို့ လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။
ပါတီဌာနချုပ်နှင့် ပါတီရုံးခွဲများတွင် စုဝေးဟောပြောခြင်းဖြစ်ပါက ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားရန် မလိုသော်လည်း သက်ဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲသို့ နှစ်ရက်ကြိုတင် အသိပေးတင်ပြရမည်ဟု ဆိုသည်။
စုဝေးဟောပြောခွင့်ရှိသူမှာ သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အလိုက် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် စိစစ်အတည်ပြုပြီးဖြစ်သည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း သို့မဟုတ် ယင်း၏ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် ယင်း၏လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းက စာဖြင့်အခွင့်အာဏာ လွှဲအပ်ခြင်း ခံရသူတို့က စုဝေးဟောပြောခွင့် ရှိမည်ဖြစ်ပြီး စာဖြင့်လွှဲအပ်ထားသူများ ပါရှိပါက ထိုသို့လွှဲအပ်သည့်စာကို သက်ဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲသို့ လျှောက်လွှာနှင့်အတူ တစ်ပါတည်း ပေးအပ်စေရမည်ဟု ဖော်ပြသည်။
သက်ဆိုင်ရာကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ အသီးသီးသည် လျှောက်ထားချက်များကို လိုအပ်သလိုစိစစ်ပြီး ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်/ဖြည့်စွက် လျှောက်ထားစေခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပြီး အခြားသတ်မှတ်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ခွင့်ရှိမည် ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ အသီးသီးသည် လုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် နယ်မြေအေးချမ်းသာယာရေးကို ထောက်ရှု၍ လိုအပ်ပါက ခွင့်ပြုမိန့်ပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ခွင့်ပြုမိန့်ပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုမိန့်ကို ရုပ်သိမ်းနိုင်ခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
နိုင်ငံရေးပါတီများသည် ပုဂ္ဂလိက မီဒီယာများမှတစ်ဆင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးမှု ပြုလုပ်မည်ဆိုပါက ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်ကို ရယူရမည်ဖြစ်ပြီး ပုဂ္ဂလိကပိုင် မီဒီယာများအနေဖြင့် တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများအပြင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ဟူသော ကန့်သတ်ချက်များလည်း ညွှန်ကြားချက်မူကြမ်း၌ ပါရှိခဲ့သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ ညွှန်ကြားချက်မူကြမ်းသည် ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်းများဖြင့် ကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်း ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှလွဲ၍ ကျန်နိုင်ငံရေးပါတီ အများစုက ဝေဖန်ခဲ့ကြသည်။
“သူတို့ ညွှန်ကြားချက်တွေကတော့ သူတို့ကြိုက်တဲ့ ပုံစံမျိုးတွေ လုပ်ထားတာကို။ ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ အဆင်မပြေပါဘူး” ဟု ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇိုဇမ်က ပြောကြားသည်။
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အနေဖြင့် နိုင်ငံရေးပါတီများကို ရွေးကောက်ပွဲမပြုလုပ်မီ၊ ပြုလုပ်ချိန်များသာမက ရွေးကောက်ပွဲ ပြုလုပ်ပြီးချိန်များ၌ပါ သြဇာသက်ရောက်မှု၊ ဥပဒေအရ အရေးယူမှုနှင့် ချုပ်ကိုင်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်မည် ဖြစ် . . . . .
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ညွှန်ကြားချက်သည် ဥပဒေအရ ထုတ်ခွင့်မရှိကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ဆိုပါသည်။
“ထုတ်ကို ထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့လည်း ဆန့်ကျင်မှာပဲ။ ဥပဒေပြုရေး မဏ္ဍိုင်ကိုလည်း ထိခိုက်မှာပဲ” ဟု ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောကြားသည်။
“မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကန့်သတ်ချက်တွေ ပါလာပြီ။ ဒါ့အပြင် နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ လွတ်လပ်စွာ ဟောပြောစည်းရုံးခွင့်ကိုလည်း ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်တဲ့သဘော ဖြစ်နေတယ်” ဟု ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ၏ ပထမခေါင်းဆောင် ဦးအေးသာအောင်က ပြောကြားသည်။
မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလကို ရက် ၃၀ သတ်မှတ်ပေးခြင်းသည် လုံလောက်မှုမရှိဘဲ ရက်ပေါင်း ၆၀ သို့မဟုတ် သုံးလအထိ ခွင့်ပြုသင့်ကြောင်း နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်များက ပြောကြားသည်။
“မဲဆွယ်ကာလ နည်းတယ်။ တစ်မြို့နယ်တည်းမှာ ရပ်ကွက်လေး ၁၅ ခု၊ အခု ၂၀ လောက်ဆိုရင်တော့ ဟုတ်တာပေါ့လေ။ ဒါပေမဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော်လို ဟာမျိုးကျတော့ ရပ်ကွက်ပေါင်းများစွာ၊ မြို့နယ်ပေါင်းများစွာကို လှည့်လည်တရားဟောရမယ့်အပိုင်း ရှိတယ်လေ။ ဒါက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ဦးအတွက် ဘယ်လိုမှ မလောက်နိုင်ဘူး” ဟု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အင်အားစုပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်ဆွေက ဆိုသည်။
“မီဒီယာနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ဖျက်ကိုဖျက်ပစ်ရမယ်။ ဒါက ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတို့၊ ၂၀၁၀ ရွေး ကောက်ပွဲတို့ကို အခြေခံထားတဲ့ လုပ်နည်းလုပ်နည်း။ အဲဒီအချိန်တုန်းက မီဒီယာရဲ့ ပွင့်လင်းမှုက လုံးဝမရှိသလောက်ပဲလေ။ အခု ၂၀၁၄ မှာ မီဒီယာရဲ့ ပွင့်လင်းမှုက ကြီးလာတယ်။ ပုဂ္ဂလိကလိုင်းတွေနဲ့ ပြည်သူလူထုကို စည်းရုံးပြောဆိုတဲ့ အခါတိုင်း ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို ခွင့်ပြုချက်ကြီး တင်နေရမယ်ဆိုရင် အလုပ်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး” ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ညိုညိုသင်းက ပြောကြားသည်။
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ လက်ရှိခြေလှမ်းများကြောင့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် သံယဖြစ်မှုများ ရှိလာသည်။
“၂၀၁၅ အတွက် သံသယတွေ ရှိလာတယ်။ အထူးသဖြင့် ပြီးခဲ့တဲ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ထင်ရှားတဲ့ ပါတီတစ်ခုက မဲဆန္ဒနယ် အားလုံးနီးပါး အပြတ်အသတ် အနိုင်ရသွားလို့ အခုလို ကန့်သတ်ချက်တွေ လုပ်တယ်လို့ အသံတွေ ကြားနေရပါတယ်” ဟု ဦးအေးသာအောင်က ဆိုသည်။
“အခုက ဥပဒေနဲ့လုပ်ရမယ် ဘာညာပြောနေတာ။ ဥပဒေနဲ့ မလုပ်တာ ကော်မရှင်တွေပဲ။ ဒါပေမဲ့ လူအများ နားမလည်တာက မြို့နယ်ကော်မရှင်တွေ မလုပ်ဘဲနဲ့ သူတို့ အနိုင်ပေးချင်တဲ့ ပါတီကို အနိုင်ပေးတာ။ အဲဒါမျိုးကတော့ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကို တရားစွဲလို့ ရမလား။ ဘယ်ဥပဒေနဲ့ တရားစွဲမလဲ။ ပြစ်ဒဏ်က ဘယ်လောက်လဲ။ သေဒဏ်ပေးမလား။ ထောင်ဒဏ်ပေးမလား။ အဲဒီညွှန်ကြားချက်တွေက လုံးဝပါမလာဘူး” ဟု ဦးဇိုဇမ်က ဆိုသည်။
ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ ဆိုသည့်တိုင် လိုရာဆွဲသုံးပြီး မျှော့ကြိုးသဖွယ် ပြုလုပ်နိုင်သော ဥပဒေများကြောင့် ၂၀၁၅ မတိုင်မီ အကြိုစည်းရုံးမှု ကာလမှာပင် ရှုပ်ထွေးမှုများ ရှိလာနိုင်သည်ဆိုသော သုံးသပ်မှုများလည်း ရှိနေပါသည်။
“ဒီလောက်နိမ့်ကျတဲ့ နိုင်ငံ၊ ဒီလောက် အတိဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာကို ထောက်ထားသင့်တယ်။ စိတ်တိုင်းကျ ရေးဆွဲထားတဲ့ ဥပဒေဘောင်တွေကနေ ညစ်ပတ်မယ်ဆိုတာ မသင့်တော်ပါဘူး။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ညစ်ပတ်နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကြိုးစားလာမယ်ဆိုရင် ဒါက Crossing the Line ပါပဲ။ တိုင်းပြည် အတိဒုက္ခ ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲဟာ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲလို အာဏာမလွှဲလို့ မရဘူး။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲလို ညစ်ပတ်လို့ မရဘူး။ အခြေအနေ မတူဘူး။ တိုင်းပြည်မျက်နှာ၊ လူထုမျက်နှာကိုကြည့်ပြီး ညှိနှိုင်းတိုင်ပင် ဆွေးနွေးကြပါ။ လူထုကလိုလားတဲ့ အစိုးရတစ်ရပ်ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်နိုင်ဖို့ အားလုံးဝိုင်းလုပ်ကြရပါမယ်” ဟု Eleven Media Group ၏ CEO ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်က ပြောကြားသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အတွင်းက ပြုလုပ်ခဲ့သော နိုင်ငံတကာ ရွေးကောက်ပွဲများအနက် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနှင့် ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံတို့၏ ရွေးကောက်ပွဲများတွင် ရွေးကောက်ပွဲ မသမှုများစွာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။
ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံ၌ ပြုလုပ်ခဲ့သော ရွေးကောက်ပွဲ၌ အစိုးရပိုင် မီဒီယာများ၏ ဘက်လိုက်ဖော်ပြမှု၊ ကျေးလက်ဒေသများတွင် ခြိမ်းခြောက်မှု၊ ရွေးကောက်ပွဲ လျင်မြန်စွာ လုပ်ဆောင်မှု၊ မဲပေးနိုင်သူစာရင်းကို ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ တစ်ရက်အလိုတွင် ထုတ်ပြန်ပေးမှု၊ မဲပေးနိုင်သူ စာရင်းတွင် သေဆုံးပြီးသူများ အပါအ၀င် မသက်ဆိုင်သူများ၏ အမည်များ ပါဝင်နေမှု၊ အတိုက်အခံ အင်အားများသော နေရာများတွင် နေထိုင်သူများ စာရင်း၌ ပါဝင်ခြင်းမရှိမှု အစရှိသည်တို့ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွင်မူ ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အချက်များအပြင် မတူညီသော မဲရုံများတွင် အမည်နှစ်ကြိမ် ပါဝင်နေခြင်း၊ မဲပေးရာတွင် မည်သူမည်ဝါ ဖော်ပြရန်မလိုခြင်း၊ တရားမ၀င် နေထိုင်သူများ မဲပေးခွင့် ရရှိခဲ့ခြင်း၊ ယာယီနေထိုင်ခွင့်များ ထုတ်ပေးရာတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိခြင်း၊ ယာယီနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ကိုင်ဆောင်သူများ မဲပေးခွင့်ရှိခဲ့ခြင်း၊ မဲဆန္ဒရှင်မှ သွားရောက်မဲပေးရာတွင် ၎င်းအမည်ဖြင့် မဲပေးပြီး ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရှိရခြင်း အစရှိသည်တို့ ဖြစ်သည်။
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကို ပြောင်းလဲသင့်ပြီလား
၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ အချိန်တွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌတို့၏ ရပ်တည်ချက်အပေါ် မေးခွန်းထုတ်စရာများ ရှိနေသဖြင့် ထိုသူများကို အခြားသမာသမတ်ကျသော ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် အစားထိုးပြီး ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အသစ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရန် တိုက်တွန်းမှုများလည်း ရှိနေပါသည်။
“စိုးရိမ်တာက ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ပဲ။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပမယ့် ကော်မရှင်ထဲက ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်း မည်သည့်ပါတီနဲ့မျှ မသက်ဆိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ပါသင့်တယ်” ဟု ဦးအေးသာအောင်က ပြောကြားသည်။
“ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက် ဒိုင်လူကြီးပဲ။ ဒိုင်လူကြီးဆိုတာကတော့ ဘက်လိုက်လို့ မဖြစ်ဘူး။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေဘက်က နစ်နာဖို့ဟာတွေ အများကြီး တွေ့ထားတာကိုး။ အဲဒါကြောင့် သမ္မတကြီးကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် တင်ပြတဲ့ကိစ္စက ရွေးကောက်ပွဲ ဗဟိုကော်မရှင်ကအစ မြို့နယ်အထိ ပြန်ပြီးပြုပြင်ပေးပါလို့ ပြောထားတာ။ ကျွန်တော်ကတော့ ရှင်းရှင်းလေးပဲ။ (ဒီကော်မရှင်နဲ့ ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်) တရားမျှတမှု ရှိလိမ့်မယ်လို့ မယုံဘူး။ အခုထက်ထိ ကျွန်တော်အယုံအကြည် မရှိသေးဘူး” ဟု ဦးဇိုဇမ်ကဆိုသည်။
“ကော်မရှင်ဆိုတာကတော့ တရားမျှတရမှာပေါ့။ သီလ၊ သမာဓိ၊ သိက္ခာနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို များသောအားဖြင့် ခန့်ပါတယ်။ အဲဒီသူက ဘက်လိုက်မှုကင်း၊ တရားမျှတမှုရှိ၊ အမှီအခို ကင်းရပါမယ်။ ကျွန်တော်ဆိုလိုတာက သူက လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေ ကျင်းပမယ်ဆိုရင် ကိုယ်တိုင်ကိုက ပါတီစွဲ မရှိရပါဘူး။ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ မရှိရပါဘူး။ တစ်ဖက်မှာ ကမ်းပြိုမယ်။ တစ်ဖက်မှာ သောင်ထွန်းမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်မျိုး ရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီလိုလူမျိုးက ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌရာထူးနဲ့ မသင့်တော်ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်တယ်” ဟု လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်သူများအဖွဲ့မှ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ဦးမြင့်အေးက ပြောပါသည်။
“လက်ရှိ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းထားတာက ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်က ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြီးတော့ ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေကလည်း အရင်တုန်းက ၀န်ထမ်းဟောင်းတွေနဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေ၊ ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းတွေမှာလည်း အဲဒီလိုမျိုး စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတယ်။ ဒါက ဖွဲ့စည်းမှုပေါ့။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းမှုကိုက တရားမျှတမှုမရှိဘူး ဖြစ်နေတယ်” ဟု လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး ကွန်ရက်မှ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးမျိုးရန်နောင်သိမ်းက ပြောကြားသည်။
“သမ္မတအနေနဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့ ကျင့်ဝတ်အရ ပြောမယ်ဆိုရင် ကိုယ်နဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တဲ့ သူတစ်ယောက်ကို ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ခန့်ထားတာ၊ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုမှ မသင့်တော်ပါဘူး။ သမာသမတ်ကျတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် တစ်ခုတော့ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း သင့်ပါတယ်” ဟု Eleven Media Group ၏ CEO ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်က ပြောကြားခဲ့သည်။